एक यायावरको बयान/ममचा पसलमा जोधमल ~ brazesh
एक यायावरको बयान/ममचा पसलमा जोधमल
June 19, 2019 अन्य, नेपाली, प्रकाशित, यायावर No comments
सौर्य अनलाइनमा २०६९ फागुन २५ गते २३:५२ मा प्रकाशित
ब्रजेश फिल्म लेखनमा चिनिएको नाम हो । पत्रपत्रिकामा पनि उनका लेख बिकिरहेकै छन् । उनको पहिलो उपन्यास ‘यायावर’ शुक्रबार विमोचन भएको छ । लेखनलाई साधना एवं तपस्या मान्ने ब्रजेशले एउटा फिरन्ते वा गन्तव्यहीन यात्रामा रूमल्लीने मान्छेलाई मूल पात्र बनाएर लेखिएको ‘यायावर’बारे गरिएको वार्ता–
‘यायावर’ उपन्यासले यस शब्दको विराट अर्थ बोकेको छ ? यो कसरी लेखियो ?
यसको खाका मगजमा खेलिरहेको केही वर्ष भैसकेको थियो । तर, आफ्नै पारामा अल्छी मान्दै लेखिरहेको थिएँ । र, अघिल्लो वर्ष अर्किड बुक्सका साथीहरूले एउटा उपन्यास प्रकाशन गर्नुपर्‍यो भनेर प्रस्ताव राखेपछि मात्र लेखाइले तीव्रता लियो । केही दिन पोखरा गएर गुप्तवास बसेपछि मात्र यसको प्रारम्भिक पाण्डुलिपि तयार भयो ।
पत्रपत्रिकामा त तपाईंका लेखहरू बिकिरहेकै देखिन्छन् । र, नेपाली साहित्यको बजार बढिजसो फिक्सन शैलीका सामग्रीले पिटिरहेका छन् । फिल्म लेख्ने मान्छेको उपन्यासमा कतै फिल्मी फिक्सन हाबी भएको छ कि ?
फिल्म लेख्ने भनेको अरूका लागि हो । त्यो धेरै कुराले बाँधिएको, निर्देशित गरेको र धेरै हदसम्म प्राविधिक कार्य हो भने उपन्यास लेख्ने बेला लेखक स्वतन्त्र हुन्छ । चलचित्र लेखनको सीमा हुन्छ, निश्चित लम्बाइलाई ध्यानमा राखेर कथानक बुन्नुपर्छ । आफूलाई मन परेको भाषामा लेख्न पाइँदैन । तर, उपन्यास लेख्ने भनेको त्योभन्दा नितान्त फरक कुरा हो । असीमित स्वतन्त्रता पाइन्छ । त्यसैले यसमा र चलचित्र लेखनमा कुनै तुलना हुनै सक्दैन ।
त्यस्तो हुने हो भने त आत्मकथा लेखे भैहाल्यो नि । तर, उपन्यासका लागि लेखिएको कथानक पनि वास्तविकताभन्दा पृथक् र कसैले नदेखेको नभोगेको कुरा त हुन सक्दैन । लेखकले पात्र र घटनाहरू वास्तविक जीवनबाट नै टिप्ने हो । तर, त्यसो भन्दैमा उपन्यासमा आफ्नै भोगाइ र भावना मात्रै त कुनै पनि लेखकले लेख्दैन जस्तो लाग्छ । त्यसलाई आफ्नो कल्पनाको ठेकीमा हालेर मथेर परिमार्जन गर्ने हुनाले यायावर पनि मेरो मात्र नभै मैले देखेका अरू मानिसहरूका पनि टुक्राटाक्री बटुलेर तयार पारिएको यथार्थमा आधारित काल्पनिक कथानक हो भन्नुपर्छ ।
मैले पहिले लेख्दा मेरो मूल पात्रको उमेर ६० को हाराहारीमा थियो र उसले आफ्नो विगतलाई कसरी केलाउछ र सम्झिन्छ भन्ने प्रारुप थियो । तर, लेख्दै जाँदा मलाई के लाग्यो भने मभन्दा पाको मानिसले के सोच्छ, कसरी सोच्छ, के देखेको थियो, के भोगेको थियो भन्ने कुरामा म वास्तविकताभन्दा पर हुन सक्छु । तसर्थ मैले उसको उमेर घटाएर ५० को हाराहारीमा ल्याएँ । त्यतिसम्म उमेरका मान्छेहरू मैले नजिकबाट देखेको, चिनेको र संगत गरेको पनि हुनाले मलाई सजिलो भयो । मैले आफैँले पनि तीस वर्षअघि देखेको समाज यसमा चित्रण गरेको छु । राजनीतिक कुरा यसमा खासै छैनन् । तर, मेरो पात्र काठमाडांै आइपुग्दा ३६ सालको सेरोफेरो पर्ने भएकोले त्यसबेलाको राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएको गतिविधिबाट उसलाई अलग राख्न नसकेर केही प्रसंगहरू जोडेको छु । त्यसका लागि भने अध्ययन गर्नु परेको थियो । त्यसबाहेक त्यतिबेलाको काठमाडांका केही अरू सामाजिक पक्षहरू छन्, जुन पढ्दा रमाइलो हुन्छ । यहाँ धेरै नभनौँ कि ?
तपाईंको लेखन तरिका कस्तो छ ? सुरु गर्ने कुुुनै विषेश रीत छ कि ?
त्यस्तो खासै यही भन्ने कुरा त छैन तर मेरा अधिकांश लेखनचाहिँ डायनिंग टेबलमा हुन्छ । मलाई त्यहाँमाथि ल्यापटप राखेर लेख्न सजिलो लाग्छ । समयको कुरा गर्दा चाहिँ रातको समयमा सबै जना सुतिसकेपछिको निस्तव्धता र चकमन्न मेरो लागि उत्पादक समय भएको मैले पाएको छु । आ चिया र कफीचाहिँ खुबै चाहिन्छ मलाई लेख्नका लागि ।
आफूले लेखेको कुरा कत्तिको परिमार्जन गर्नुहुन्छ ?
परिमार्जन त गर्नैपर्छ । किनभने मानिस हरेक पल हरेक क्षण परिपक्व हुँदै गैरहेको हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । आफूले एक दिनअघि लेखेका कुरा अर्को दिन पढ्दा नै त्यसमा थपघट र परिमार्जन गर्ने ठाउँ भेटिन्छ । जति सक्यो पुनर्लेखन गरेको राम्रो हुन्छ । साहित्यको कुनै फर्मूला हुँदैन । हिसाबमा जस्तो दुई र दुई सधैँ चार नै हुन्छ भन्ने छैन । साहित्यको जोडघटाउ कहिले कति हुन्छ कहिले । अनि योभन्दा राम्रो लेख्न सकिन्न भन्ने सीमा पनि हुँदैन । तर, कुनै न कुनै ठाउँमा चित्त नबुझाइ सुख्खै छैन । झन् बृहत् आख्यानको कुरा गर्ने हो भने त एउटा लेखकले जीवनभर एउटै उपन्यासलाई नै पटकपटक लेखिरहे पनि परिमार्जन र पुनर्लेखन सकिँदैन ।
तपाईंलाई अन्तर्वार्ता दिन कस्तो लाग्छ ?
नढाँटी भन्ने हो भने त्यो प्रश्नहरूमा भर पर्ने कुरा हो । यदि प्रश्नहरूले मलाई मेरा सोच, मान्यता र विचार व्यक्त गर्ने ठाउँ दिए भने बडो रमाइलो हुन्छ । तर, उत्तर पहिले नै तोकिएका, नकारात्मक अथवा भन्नका लागि केही बाटो नै नछोडिएका, प्रश्नकर्ताको पूर्वाग्रह भएका अनि त्यसलाई कबुल मात्रै गराउन खोजिएका प्रश्नहरू भए भने चाहिँ दिक्दार लाग्छ ।
ममचा पसलमा जोधमल
हामीले काम गर्ने ममचा पसलमा न्युरोडतिरको जोधमल नाम गरेको एउटा व्यापारी लुकेर ममचा र रक्सी खान आउँथ्यो । उनीहरूको जातले बर्जित कुरा थियो माछामासु र रक्सी । जोधमल त्यतिबेलाको एउटा नयाँ फस्टाएको व्यापारमा लागेको थियो । यहाँबाट बैंकक गएर लुगाफाटा, घडी र सुन ल्याउने काम गथ्र्यो ऊ । एउटा मान्छेले एउटा निश्चित संख्यामा ती सामानहरू भन्सार नतिरी ल्याउन पाउँथ्यो । व्यापारीहरूले त्यसको फाइदा उठाउने तरीका निकालेका थिए । उनीहरू आफूसँग थुप्रै मान्छेहरू लिएर जान्थे । भरिया भनिन्थ्यो त्यस्ता मान्छेहरूलाई । ती सबैले सुविधामा ल्याएको सामानहरू व्यापारीहरूले काठमाडांै आएपछि आफँै लिन्थे र बजारमा महँगोमा बेच्थे । गरिबी र अभावले ग्रस्त मजस्ता मान्छेहरूको कमी थिएन काठमाडांैमा । म साहूको आँखा छलेर जोधमललाई बेलाबेला सित्तैँमा ममचा खुवाइदिन्थेँ । चार पेग रक्सी खायो भने एक पेगको मात्र हिसाब साहूलाई बताइदिन्थेँ । जोधमल खुसी भएर मलाई अलिअलि टिप्स दिन्थ्यो ।
एकदिन जोधमलले मलाई सोध्यो, ‘बैंकक जान्छस् ?’
मैले त सोच्दै नसोचेको कुरा थियो त्यो । एकैपटक केही भन्नै आएन । मलाई कताकता डर पनि लाग्यो । ममचा पसलमा ग्राहकहरूले बेलाबेला गरेका कुराहरू याद आयो । कति मान्छेले भरियाहरूको गुदद्वारमा चरेस अफीमका डल्लाहरू कोचेर लैजान्छन् रे । उता कानुन कडा छ र त्यस्तो फेला पर्‍यो भने सोझै लगेर झुन्ड्याउँछ रे भन्ने पनि सुनिन्थ्यो । मलाई पनि जोधमलले त्यस्तै गर्न खोज्या त हैन होला नि । मैले केही भन्न सकिनँ । मैले त्यस रात भैरेसँग जोधमलको प्रस्तावको बारेमा सल्लाह गरँे । भैरे उत्साहित भयो ।
‘बरु मलाई पनि मिलाइदे न †’ अर्को दिन जोधमललाई सित्तैँको ममचा खुवाउने बेला मैले भनेँ, ‘लैजान नहुने कुरा लिएर जाने त हैन नि ?’
जोधमल हाँस्यो । तातो ममचा मुखमा हालेर स्यूस्यू गर्दै चपायो र भन्यो, ‘तैँले मलाई इस्मगलर भन्ठानिस् ? म त चोखो वेपारी मान्छे । चोखो काम मात्र गर्छु । लत्ता कपडा, घडीवडी, अलिअलि सोना, टेपरेकर्डर ल्याउने हो । लैजाने, घुमाउने, खुवाउनेको इलावा एक सेट लगाएको कपडा पनि तैँले पाउँछस् ।’
म सोच्न थालँे । जोधमलले अर्को ममचा चपाउँदै भन्यो, ‘फरेन कन्ट्री जाने भनेको किस्मतको कुरा हो । जो पायो त्यही कहाँ जान पाउँछ रे बुरबक ? तैँले त मेरो दिल जितेकोले भनेको । नत्र मलाई लैजा भन्नेहरूको कमी छ के काटमाडौंमा ?”
अनि उसले बैंककको वर्णन यसरी सुनायो, म लालायित भएँ ।
‘मेरो साथी भैरेलाई पनि लग्नुस् न हुन्छ ?’
जोधमलले हामीलाई पासपोर्ट बनाएर भेट्न भन्यो । हामीले पैसा बचायौँ । पासपोर्ट बनाउनका लागि गाउँ पञ्चायतको सिफारिस जस्ता कामका लागि भैरे र म एकपटक फेरि गाउँ फर्कियौँ ।
दण्डपाणि काकाले उसलाई खुबै खोर्‍याइखोर्‍याइ सोधे । किन, के, कसरी भन्ने हजारौं प्रश्नहरू गरे । मलाई त सोधीखोजी गर्ने पनि कोही थिएन । जुनेलीले मसँग केही सोध्ने कुरै भएन । म गाउँ आएको थाहा पाएर उसका बा भेट्न आएका थिए । उनले चाहिँ सोधेका थिए, ‘ज्वाइँनारान काठमाडांैमा के गर्नुहुन्छ ?’
‘काम गर्छु । पढ्छु ।’ मैले संक्षिप्त जवाफ दिएँ ।
उनी गर्वले फुले ।
भैरै र मेरो पासपोर्ट बन्यो । जोधमलले आफ्नो वाचा पूरा गर्‍यो । हामी दुई भाइ फरेन टूरका लागि उड्यौँ । गाउँमा हँुदा आकाशमा उडेको हवाइजहाज देख्दा कुनै दिन म त्यहाँभित्र बसेर मीठा कुराहरू खाइरहेको हुन्छु भन्ने कल्पना गर्न पनि मुस्किल थियो ।
सानासाना देखिएका डाँडाहरूलाई हेर्दै मैले सोचेँ, ‘हाम्रो गाउँ कहाँनिर पर्छ होला ? जुनेलीले अहिले यो हवाइजहाज हेरिरहेकी होली ? हेरिरहेकी भए तेल्लाई यहाँभित्र म छु भन्ने कुरा के थाहा ?’
पुतलीजस्ती केटीले ल्याएर भनेभनेको कुरा खान दिने रहिछ । जोधमलले भन्यो, ‘फिरीमा हो । पैसा लाग्दैन । सब कुरा टिकटमै छ ।’
भैरे र मैले पहिलोपटक बेलायती रक्सी चाख्यौँ ।
‘क्या काइदाको हुँदो र’छ ।’ उसले जिब्रो पड्काउँदै भन्यो । हामीले थपेर तीनपटक खायौँ । जोधमलले त्योभन्दा बढी खान दिएन र मात्र । उससँग हामी जस्ता भरियाहरू अरू आठ जना थिए । त्यहाँ पुगेको बेलादेखि यताउति नगर्नू, खुरुखुरु उसको पछि लाग्नु भनेर उसले काठमाडांंैमा नै सिकाएको थियो ।
‘तिमीहरूको सप्पैको पासपोर्ट मसँगै हुन्छ । इधरउधर भयो भने र बिना पासपोर्ट पुलिसले पक्ड्यो भने जेलमा डालिदिन्छ ।’ उसले तर्साएको थियो ।
त्यसैले उता एयरपोर्टमा ओर्लेदेखि हामी माउको पछि चल्ला लागे जसरी उसकै पछिपछि मात्र हिँड्यौँ । त्यसै पनि त्यहाँको एयरपोर्ट देखेर हाम्रो सातो गैसकेको थियो । न भाषा बुझिने कसैको । एयरपोर्टबाट सहर पुग्न पनि कति हो कति टाढा । कत्राकत्रा चौडा बाटा, कति सफा, कत्राकत्रा घरहरू ।
मैले सोचेँ, ‘हाम्रो धरहरालाई त मात खुवाउने रहेछ ।’
हामी बस्ने होटल पनि कति चिल्लो थियो । बैंकक मेरा लागि दन्त्यकथाको देशजस्तो भयो । जोधमलले लगेर किनमेल गरायो । बाहिर हिँड्दा मेरा लागि सबै कुरा सपना जस्ता थिए । केटीहरू यति छोटाछोटा र साना लुगा लगाएर हिँडेका हुन्थे, म मात्र हैन हामी सबै टक्क अडेर ट्वाँ परेर हेथ्र्यौं । जोधमलले आएर हामीलाई तान्नुपथ्र्यो । हामी सबैलाई आफूलाई ठीक हुने लुगाबाहेक त्योभन्दा एक साइज ठूलो, त्योभन्दा अझ एक साइज ठूलो र अझै एक साइज ठूलो लुगाहरू पनि उसले किनायो । घडी, सुनको सिक्री, सुनको बाला, टेपरेकर्डर, रेडियो, क्यामरा र अत्तर जस्ता कुराहरू पनि किनायो र ठूल्ठूला सूटकेसमा हाल्न लगायो । फर्कने बेला हामीले आफ्नो साइजको लुगामाथि त्योभन्दा ठुलोठूलो गर्दै सबै लुगा लगायौँ । हामीलाई त हिँड्डुल गर्न पनि गाह्रो हुने भयो । मैले पुस्तकालयको कुनै पत्रिकामा देखेको अन्तरिक्ष यात्री जस्तो भएको थिएँ म । टाउकोमा घ्वाप्प छोप्ने सिसाको टोपी मात्र थिएन । सुनका बाला, सिक्री, घडी लगाएको बेला आफूलाई आफैँ कुनै करोडपतिजस्तो लाग्यो मलाई । त्यहाँको उखर्माउलो गर्मीमा त्यत्रो लुगा लगाएका हाम्रो दललाई मानिसहरू अचम्म मानेर हेर्थे । नेपाल आउनासाथ हामी सबैलाई जोधमलले गाडीमा हालेर एकठाममा लग्यो । दुर्योधनले चीरहरण गर्दा द्रौपदीका लुगाहरू फुकाले जसरी जोधमलले हामीलाई खोल्यो । फोकटमा फरेन ट्रिप बाहेक हामीले एकएक वटा पाइन्ट र पातलो टिसर्ट इनाम पायौँ । म दङ्ग परँे ।
मैले आइए को जाँच दिइसकेको थिएँ । तर, त्योभन्दा बढी मैले पढ्न सकिनँ । जोधमलसँग म र भैरे पटकपटक बैंकक गयाँै । हामीलाई अब एक्लै यताउति घुम्न अलि आँट आउन थालेको थियो । एकपटक बैंकक गएको बेला भैरे र अर्को एकजना भरिया राती मोज गर्न जाने भए । भैरेले त्यसबेलाका लागि भनेर पेट काटेर पैसा जम्मा गरेको थियो । मलाई आँट आएन, म होटलमै बसेँ । उनीहरूले खोजेका दुइटी केटीहरूले उनीहरूलाई कतातिर गल्ली भित्रको घरमा लगेछन् । केटीहरू चिटिक्क परेका थिए रे । अनि कोठाभित्र तिनीहरूले लुगा खोलेर उनीहरूलाई आफ्नो पुरुषको अंग पो देखाइदिए छन् । भैरेहरूको सातो उडेछ । दुरुस्तै केटीजस्ता देखिने ती केटाहरूले उनीहरूसँग भएको जति पैसा लुटेर दुई/चार थप्पड हानेर भगाइदिए छन् । धेरैपछि एक दिन भैरेले रक्सी लागेको बेलामा मात्र यो कुराको पोल खोलेको थियो ।
‘माकस्सम बैकुन्ठे, तँैले नि तिनीहरूलाई देख्या भए मुजीहरू केटा होलान् भनेर चिताउन पनि सक्दैनथिइस् ।’
(लेखक ब्रजेशको शुक्रबार सार्वजनिक पहिलो उपन्यास ‘यायावर’ को एउटा अंश)